ဟဲဟိုး လေဆိပ် - ဝီကီပီးဒီးယား
(ဟဲဟိုးလေဆိပ် မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
အင်္ဂလိပ်: Heho Airport
ဟဲဟိုးမြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ
၃,၈၅၈ ပေ / ၁,၁၇၆ မီတာ
20°44′49″N 096°47′31″E﻿ / ﻿20.74694°N 96.79194°E﻿ / 20.74694; 96.79194
18/36 8,500 2,591 နိုင်လွန်ကတ္တရာ
ဟဲဟိုးလေဆိပ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ တောင်ကြီးခရိုင်၊ ကလောမြို့နယ်တွင် တည်ရှိသည်။ အဓိက နိုင်ငံခြားသားခရီးသည် များ လာရောက်လည်ပတ်ကြသည့် အင်းလေးကန်ဒေသတဝိုက် ကို ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိသည်။
ဟဲဟိုးလေဆိပ်သည် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းက မဟာမိတ်အဖွဲ့များနှင့်သာမက ဂျပန်တို့၏ လေကြောင်းအခြေစိုက်စခခန်းအဖြစ် အသုံးပြုခြင်း ခံရခဲ့သည်။ မဟာမိတ်အဖွဲ့ ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုလည်း ခံခဲ့ရသည်။ လေယာဉ်အပျက်အစီး အပိုင်းအစများနှင့် ဗုံးခွံများကို လေယာဉ်ကွင်း၏ တောင်ဘက်တွင် တွေ့ရှိသည်။
လေဆိပ်သည် ပင်လယ်ပြင်မျက်နှာပြင်အထက် ၂၈၅၈ ပေ (၁၁၇၆ မီတာ) အမြင့်တွင် တည်ရှိသည်။ လေယာဉ်ပြေးလမ်းကို နိုင်လွန်ကတ္တရာ ခင်ထားပြီး အရှည်အားဖြင့် ၈၅၀၀ ပေ ရှိသည်။ ယခင်က ၅၅၀၀ ပေသာ ရှိခဲ့ရာ ဂျက်လေယာဉ်များ ဆင်းသက်နိုင်ရန်အတွက် လေယာဉ်ပြေးလမ်းကို တိုးချဲ့ခဲ့သည်။
အဲပုဂံ မန္တလေး၊ သံတွဲ၊ ရန်ကုန် ပြည်တွင်း
အဲကေဘီဇက် မန္တလေး၊ ရန်ကုန် ပြည်တွင်း
အေးရှန်းဝင်း လေကြောင်းလိုင်း မန္တလေး၊ ရန်ကုန် ပြည်တွင်း
မန်းရတနာပုံ လေကြောင်းလိုင်း မန္တလေး၊ ရန်ကုန်၊ ပုဂံညောင်ဦး၊ သံတွဲ၊ ကျိုင်းတုံ၊ တာချီလိတ်၊ မြစ်ကြီးနား ပြည်တွင်း
မြန်မာအမျိုးသား လေကြောင်းလိုင်း ကျိုင်းတုံ၊ လားရှိုး၊ မိုင်းဆတ်၊ ပုဂံညောင်ဦး၊ တာချီလိတ်၊ ရန်ကုန် ပြည်တွင်း
ရန်ကုန် လေကြောင်းလိုင်း မန္တလေး၊ ရန်ကုန် ပြည်တွင်း
အက်ဖ်အမ်အိုင် လေကြောင်းလိုင်း ရန်ကုန် ပြည်တွင်း
ဟဲဟိုးလေဆိပ်ကို ဝေဟင်ပေါ်မှ တွေ့ရစဉ်
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက်နေ့တွင် အဲပုဂံ လေကြောင်းလိုင်း ခရီးစဉ်အမှတ် ၁၁ သည် ဟဲဟိုးလေဆိပ်သို့ ဆင်းသက်ချိန်တွင် မတော်တဆ ဖြစ်ခဲ့သည်။ လေယာဉ်အတွင်း ပါရှိသော ခရီးသည် (၁) ဦး နှင့် မြေပြင်ပေါ်ရှိ ဆိုင်ကယ်မောင်းနေသူတစ်ဦး သေဆုံးခဲ့ရသည်။
၁၉၈၇ ခုနှစ် ဇွန် ၂၁ ရက်နေ့တွင် မြန်မာ့လေကြောင်းလိုင်းမှ Fokker F-27 Friendship 200 အမျိုးအစားလေယာဉ်သည် ဟဲဟိုးလေဆိပ်မှ ထွက်ခွာစဉ် တောင်နှင့် ဝင်တိုက်မိပြီး လေယာဉ်ပေါ်ပါသူ ၄၅ဦးလုံး သေဆုံးခဲ့ရသည်။
၁၉၈၇ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ဗမာ့လေကြောင်းလိုင်းပိုင် Fokker F-27 Friendship 500 အမျိုးအစားလေယာဉ်သည် အမြင့်ပေ ၁၅၀၀ရှိ တောင်တစ်လုံးနှင့် ဝင်တိုက်မိကာ လေယာဉ်ပေါ်ပါသူ ၄၉ဦးလုံး သေဆုံးခဲ့ရသည်။၎င်းအဖြစ်အပျက်သည် မြန်မာ့လေကြောင်းသမိုင်းတွင် ဒုတိယအသေအပျောက်အများဆုံး လေကြောင်းမတော်တဆမှုဖြစ်သည်။ သေဆုံးသူများထဲမှ ၃၆ဦးမှာ နိုင်ငံခြားသားများဖြစ်ပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံသား ၁၄ဦး၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသား ၇ဦး၊ ဗြိတိန်နိုင်ငံသား ၅ဦး၊ ဩစတြေးလျနိုင်ငံသား ၄ဦး၊ အနောက်ဂျာမနီနိုင်ငံသား ၃ဦး၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံသား ၂ဦး နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံသားတစ်ဦးတို့ပါဝင်သည်။ 
↑ Airport information for VYHH from DAFIF (effective October 2006)
↑ Airport information for HEH at Great Circle Mapper. Source: DAFIF (effective October 2006).
↑ "CRASH OF AIRLINER IN BURMA KILLS 49, 14 FROM U.S."New York Times. 12 October 1987. Retrieved 13 March 2016.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဟဲဟိုး_လေဆိပ်&oldid=704558" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၁:၂၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။